भादो १६ गते देखि कुन कुन देश बाट उडान खुल्ने र कुन कुन देश बाट नखुल्ने !! | Saptari Today
Home अन्तर्राष्ट्रिय भादो १६ गते देखि कुन कुन देश बाट उडान खुल्ने र कुन...
भादो १६ गते देखि कुन कुन देश बाट उडान खुल्ने र कुन कुन देश बाट नखुल्ने !!
६ भाद्र २०७७, शनिबार ११:१६
भदौ १६ गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न दिने केही नियहरुको पालना गरी सरकारले निर्णय गरेका छन ।
PCR परीक्षण सहज भएका देशहरु बाट नेपालमा नियमित उडान गर्न दिने सरकारले निर्णय गरेकाे छन। हंकङ्ग , दुबई, , थाइल्याण्ड, जापान, चीन, अमेरिका, क्यानडा युरोपेली देश, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया र मलेसिया लगायत का देशहरु बाट उडान गर्न निर्णय गरेका छन। तर उडानमा नेपाली नागरिक, नेपालमा रहेका विदेशी नियोगका कुटनीतिज्ञ र कर्मचारी र विकास साझेदार संस्थाका कर्मचारी र प्रतिनिधि मात्रै अनुमति भेटिनेछ।
PCR परीक्षण सहज नभएका देशहरु कतार, साउदी अरब, कुवेत र अन्य देशबाट नियमित उडानबाट यात्रु ल्याउन पाउने छैन । नियमित उडानको लागि अनुमति नभएका देशहरुमा भने चार्टर्ड उडानमार्फत श्रमिकको उद्धार गर्न सकिने सरकारले जानकारी गराएका छन ।
नेपाल आउनेले जहाज चढ्नु ७२ घण्टा अघिको प्रमाणपत्र देखाउनुपर्ने र नेपाल आउने फारम भरेको र होटल बुकिङको प्रमाण देखाउनुपर्नेछ । उनीहरुले सात दिन होटल क्वरेण्टीन बस्ने खर्च पनि टिकट काटने बेला नै बुझाउनुपर्नेछ । सरकारले तोकेका मापदण्ड विपरीत यात्रु बोकेर आएका जहाजलाई कारबाही गरिनेछ ।
सरकारले श्रमिक उद्धार गर्ने काम फेरि सुरुवात गरेका छ्न । दैनिक ५०० सम्म विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीहरुको उद्धार गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छन। सरकारले उद्धार गर्नेहरुलाई क्वारेन्टाइन खर्च सरकारले बेहोर्ने छन र सरकाले बेहोर्ने भए पनि यात्रुले होटल क्वरेण्टीनको खर्च आफै बेहोर्नुपर्नेछ ।
पछाडि पोस्टतराई भुभागमा गणैश चतुर्थी (चौरचन) पर्बको हर्षोल्लास
अगाडि पोस्टजनकपुरमा एक युवकको सब पोखरीमा फेला परेका छन !